IZIMALI ZANGAPHAMBILI: MANJE YISIKHATHI SOKUTSHALA IZIMALI. - FOREXFUNDS.COM
IZIMALI ZANGAPHAMBILI: MANJE YISIKHATHI SOKUTSHALA IZIMALI.
Manje yisikhathi esihle kakhulu sokutshala imali kwizikhwama ze-Forex. Ngoba izimakethe ziphakeme kakhulu ihlangene, akukaze kube yinto ebucayi noma eyinselele yokwenza iphothifoliyo yokutshalwa kwemali ehlukahlukene. Ukutshala imali esikhwameni se-Forex esiphethwe kahle noma kwi-akhawunti yemali ephethwe kungaqeda izinyathelo ezimbi ezimakethe zomhlaba ezilinganayo nezamabhondi. Futhi, imikhiqizo ephethwe ye-Forex inganikeza isivuno esikhulu lapho ezinye izimakethe zidlula eziphansi ukungazami izinkathi. Yize ukuguquguquka kungaletha ubungozi, futhi kungavula imivuzo ebalulekile.
KUNGANI IZIMALI ZE-FOREX? SENGIYAZI UKUTHI NGIZITHENGA KANJANI
Izimali ze-Forex ezilawulwa yi-akhawunti yokuhweba ye-akhawunti.
Njengoba nje Iphothifoliyo ehlukahlukene iqukethe ukubamba okuhlukile, amasu, amakilasi wempahla, nezinhlobo ezahlukahlukene zokutshalwa kwemali nezinsimbi, ngakho-ke kufanele iphothifoliyo Yezangaphandle.
Abahwebi abanezikhwama ezibalulekile ze-Forex bangaba nama-akhawunti amaningi, anezakhiwo ezahlukahlukene njengoba kushiwo ngenhla, ngaphezu kokuzidayisa nokusebenzisa amarobhothi noma amasiginali wokuhweba ngokwawo.
Ama-Akhawunti we-Forex aphethwe ngokuvamile asho ukuthi umtshali-zimali uvumela umphathi wemali ukuthi ahwebe i-akhawunti ye-Forex yabatshalizimali, ephethwe egameni lomtshali-zimali futhi okungcono kumthengisi wezentengiselwano olawulwayo. Ukugunyazwa kokuhweba kunikezwa ngamandla alinganiselwe abameli (i-POA), evumela kuphela ukuhweba (hhayi ukukhipha noma ukufaka imali) ngumphathi wesikhwama kuze kube lelo gunya lihoxisiwe noma umtshali zimali ekhipha imali.
Abatshalizimali banxanela ukungaguquguquki kokusebenza. Ukusebenza okulindelekile kuyisici esibaluleke kunazo zonke kwirekhodi lomphathi wesikhwama se-Forex. Ake sithi irekhodi lomkhondo womthengisi wemali liphambuka ekusebenzeni komlando. Kuleso simo, abatshalizimali bangakhathazeka ngokuthi indlela yomthengisi ishintshile noma ayisasebenzi, okungahle kubangele abatshalizimali ukuthi bahlenge konke noma ingxenye yezimali zabo. Abatshalizimali be-Forex abanolwazi bayaqonda ukuthi irekhodi lomkhondo omude elinembuyiselo engaguquguquki iminyaka eminingi akusona isiqinisekiso semiphumela engaguquguquki nenenzuzo yesikhathi esizayo; ngakho-ke, abatshalizimali kumele ngaso sonke isikhathi balandele ukusebenza kwabathengisi babo futhi bakufanise nemiphumela yomlando. Ukubuyekeza ukusebenza komlando uma kuqhathaniswa nezimbuyiselo zesikhathi sangempela kufanele kube yingxenye yakho konke okutshalwe ngumtshalizimali ukukhuthala okufanele inqubo.
UKWENZA IZINQUMO EZINZIMA KULULA
Kunezinye izinto eziningi ezahlukanisayo, zombili ezilinganiselwe neziphathekayo, ezizofaneleka kumtshali-zimali ukuphenya ukuthi ngubani ongase avule i-akhawunti ephethwe yi-Forex noma atshale imali esikhwameni se-hedge esidayisa imali.
Umtshalizimali angahlukahluka ngokwakha iphothifoliyo enkulu ye-Forex noma athuthukise iphothifoliyo enezinto eziningi lapho isikhwama se-Forex sizosebenza njengenye yezindlela zokutshala imali zangaphandle. I-Forex ephethwe akufanele ibe yindlela yokuthola imali yonke yomtshalizimali. Lokhu kufanele kube yiqiniso kungakhathalekile inani lamadola noma ukuthi isikhwama sinamalini kuma-Assets Under Management (AUM). Esikhundleni salokho, kufanele limele iphesenti lezinto ezibanjwayo umtshalizimali azabela ukwehlukahluka ngenkathi ecubungula inzuzo / ingozi engaba khona.
UKUVULWA KWE-AKHAWUNTI NOKUXHASWA KWE-AKHAWUNTI I-AKHAWUNTI YE-FOREX FUNDS. YINI OKULANDELAYO? YINI OKUFANELE NGILINDELE UKUTHI NGIYABHEKA?
Iningi labathengi be-Forex online eliqhutshwa ubuchwepheshe elisebenza ezindaweni ezilawulwayo linikeza amapulatifomu nezinsizakalo ezisehhovisi labaphathi bezimali zeFX namakhasimende abo. Kodwa-ke, akuyona yonke imali yemali etholakala kuwo wonke ama-brokerage. Nasi isibonelo sokuqagela: I-ABC Forex Fund ingahle isule kuphela ukuhweba kwabo ngeBig Forex Broker, kepha hhayi ngeBest Forex Broker; ngenxa yalokho, ikhasimende elifisa ukusungula i-akhawunti ne-ABC Forex Fund kuzodingeka livule i-akhawunti neBig Forex Broker ukufinyelela umphathi wesikhwama.
Lapho umthengisi we-Forex esekhethiwe, i-akhawunti izovulwa futhi ixhaswe ngemali. Okulandelayo, i- imibhalo yokudalula izobuyekezwa futhi isayinwe ngumtshali-zimali. Amandla alinganiselwe abameli (i-LPOA) kuzodingeka ukuthi asayinwe ngumtshalizimali ukuze anikeze umphathi wezohwebo i-Forex igunya lokuhweba i-akhawunti. Umtshalizimali manje kufanele akwazi ukufinyelela ezitatimendeni zenzuzo yesikhathi sangempela nokulahleka nayo yonke imibiko yokuphela kosuku.
Ukulandela Isikhwama Se-Forex Ngemuva Kokwenza Utshalomali.
The indawo yokutshala imali yesikhwama ingafaka okuqondiwe kwansuku zonke, kweviki, kwenyanga, noma konyaka. Ngokunjalo, ukusebenza kwesikhwama kufanele kubuyekezwe ngezikhathi ezithile ukuthola ukuthi ukusebenza kuhambelana yini nokulindelwe ngabatshalizimali ekuqaleni. Le yindlela yokuphendula ebucayi yabatshali bezimali ukuthi batshele uma utshalomali luhambisana nokulindelwe kokuqala.
Uma ukusebenza kwesikhwama kungahambisani nomlando wangempela noma ocatshangelwayo, umtshali-zimali kufanele axhumane nomphathi wesikhwama ukubuza ukuthi kungani kube noshintsho ekusebenzeni. Izizathu ezingaba khona zokuthi kungani izimbuyiselo zomlando zingasafani nezinzuzo zamanje zifaka phakathi ukungazinzi emakethe noma umcimbi ongalindelekile wezwe. Uma umtshali-zimali enganelisekile ngencazelo yomphathi wesikhwama maqondana nokusebenza, umtshali-zimali kufanele acabangele ukwehlisa utshalomali lwakhe noma adonse utshalomali lwakhe ngokuphelele esikhwameni se-Forex.
Ukuxhaswa Ngokuqokwa kanye nama-Akhawunti we-Forex Aphethwe: Amasu Okuxhaswa Ngezimali Okudala
Uxhaso lwezimali luvumela… [Funda kabanzi...]
I-Copyright © 2022 · I-Prose on Uhlaka lweGenesise · WordPress · Ngena ngemvume
Sisebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi sikunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kuwebhusayithi yethu. Uma uqhubeka ukusebenzisa le sayithi sizocabanga ukuthi ujabule ngakho.YamukelaInqubomgomo yobumfihlo